पहिला समस्या चिनौं : गुणराज – eratokhabar
ई-रातो खबर २०७५, ४ बैशाख मंगलबार १८:३३ April 17, 2018 699 Views
शिक्षामन्त्रीमा गिरिराजमणि पोखरेल पुनस् चयन भएपछि बितेको एक महिना शिक्षाबारे खुबै हल्लाखल्ला भएको छ । अस्थायी शिक्षकको आयोग, त्यसको स्थगन, शिक्षा सम्बन्धी सातवटै प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग मन्त्री पोखरेलको भेटघाट र छलफल, नयाँ भर्ना अभियानमा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीको सहभागिता, सरकारको तर्फबाट शिक्षामन्त्रीद्वारा १० बुँदे सार्वजनिकीकरण हल्लाखल्लाका विषय बनेका छन् ।
देशलाई संघीयतामा लगिएको छ । अब शिक्षा सम्बन्धी धेरै काम तल्लो तहबाटै हुन्छन् । विद्यालय खोल्न, शिक्षक नियुक्ति गर्न अब केन्द्र धाउनु पर्दैन । नेपालको संविधान २०७२ मा भएको शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको शिक्षाको जिम्मेवारी, ९० प्रतिशतभन्दा बढी कम्पनीमा भएका निजी स्कुलहरूलाई ट्रस्टमा लैजाने कुरा कर्ण्प्रिय छन् । शिक्षा मन्त्रीले अबको शिक्षा समाजवादी हुन्छ भन्नुभएको छ । त्यो त झन् कति सुन्दर । त्यसैले अहिले शिक्षा मन्त्रालयबाट आएका शैक्षिक नीति र कार्यक्रमको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तर शिक्षाका समस्या अब समाधान भएर जान्छन् त ? अहिले शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षाका समस्या समाधान गर्न सक्छन् त ? मन्त्रालयले ल्याएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन्छन् त ? मलाई हुन्छन् भन्ने लाग्दैन ।
शिक्षाका समस्या स्विद्यालय छाड्ने र दोर्होयाउने समस्या
२०६३ देखि २०७३ सम्मका १० वर्षमा विद्यालयमा भर्ना हुनेको संख्या अध्ययन गर्दा नेपालको विद्यालय शिक्षाको वास्तविक चित्र देख्न पाइन्छ । २०६३ मा कक्षा १ मा १४ लाख ४१ हजार ४ सय ६० जना भर्ना भएका थिए (फ्ल्यास रिपोर्ट २०६३र०६४) । तर २०७३ सालमा ९ लाख ७३ हजार ५ सय ९५ जना भर्ना (फ्ल्यास रिपोर्ट २०७३र०७४) भएको जनाइएको छ । यो तथ्यले विद्यालय आउने बालबालिकाको संख्या कम हुँदै गएको देखाएको छ । त्यसैले भर्ना अभियान राम्रो कुरा हो । तर भर्ना भएर बीचमा कक्षा छाड्ने अहिलेको जबर्जस्त समस्या हो ।
विद्यालय शिक्षामा कसैलाई पनि अनुत्तीर्ण नगर्ने नीतिलाई ग्रेडिङ प्रणालीमा लगेर हटाइएको छ । २०७३ सालको फ्ल्यास रिपोर्ट १ अनुसार कक्षा १–५ मा ७.८ प्रतिशत दोर्होयाउने र ४ प्रतिशतले विद्यालय छाड्ने गरेका छन् । कक्षा ६–८ मा ४.४ प्रतिशतले दोर्होयाउने र ४.९ प्रतिशतले कक्षा छाडेका छन् । त्यसैगरी कक्षा ९–१० मा ३.२ प्रतिशतले दोर्होयाएका छन् भने ५.४ ले कक्षा छाड्ने गरेका छन् । २०६८ सालमा कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या १२ लाख ८४ हजार ४८ थियो भने २०७३ सालमा ९ लाख ७३ हजार ५९५ जना भर्ना भएका थिए ।
किन थोरै विद्यार्थीले मात्र विद्यालय शिक्षा पुरा गर्छन ?
बालबालिकाले विद्यालय शिक्षा पुरा नगरिकन किन छाड्छन् भन्ने बारेमा नेपालमा कुनै अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरिएको छैन । यो साह्रै दुस्खद कुरा हो । नेपालमा शिक्षामा विकास र सुधारका लागि भनेर दर्जनौं आयोग, अध्ययन समितिहरू बनाइएका छन् । गत भदौ १९ गते पनि शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा ६५ सदस्यीय उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएको छ । तर त्यसले पनि यी कुराहरूको बारेमा चासो देखाएको छैन । सायद आउने दिनमा पनि देखाइने छैन । विद्यालय पढ्दापढ्दै छाड्नका केही कारण छन् ।
तर माथि पेस गरिएको आधारभूत शिक्षाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यी पाँच वर्षहरूमा बाल विकासदेखि कक्षा ८ सम्मको शिक्षामा निजीकरण बढ्दै गएको देखाएको छ । २०६८ मा कक्षा १–५ निजी क्षेत्रमा रहेको १०.४६ बाट २०७३ मा १६.५७ प्रतिशत पुग्यो । त्यसैगरी कक्षा १–८ मा १०.५६ प्रतिशतबाट बढेर १६.७५ र त्यसैगरी कक्षा ९–१२ मा १२.०९ प्रतिशतबाट बढेर २३.०९ प्रतिशत पुगेको छ । वर्तमान शिक्षामा देखिएको यो प्रवृत्तिले संविधानमा किटान गरिएको ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निस्शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निस्शुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ’ वाक्यांशलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? चाख लाग्दो विषय त के हो भने निजी विद्यालयमा भर्नाका दौरानमा बुझाउने शुल्क, पोसाक, किताब–कापी, मासिक ट्युसन शुल्कको हिसाब निकाल्ने हो भनेमात्र राज्यले शिक्षा छुट्याइएको बजेटको आसपासमा हुन आउँछ ।
नेपालको अहिलेसम्मको शिक्षाको उत्पादन कस्तो छ भनेर बुझ्न कुनै गाह्रो छैन । यसका लागि वर्तमानका २ गतिविधि हेरे पुग्छ । पहिलो, नेपालका युवाहरू दिनको १५ सयका दरले रोजगारी खोज्न विदेशिन्छन् । दोस्रो, यहाँ बाँकी रहेका युवा कममात्र उद्यममा लागेका छन् । अधिकांश बेरोजगार छन् । उनीहरू आफूसँग भएको पुँजी परिचालन गरेर उद्यम चलाउन उद्यत छैनन् । त्यसैले पढ्ने सुविधा दिनुमात्र पनि ठूलो कुरा रहेनछ । मुख्य कुरा उनीहरूलाई दिइएको शिक्षाले स्वावलम्बी भए कि भएनन् भन्ने रहेछ ।
माननीय मन्त्रीज्यूले आफ्नो ऊर्जाशील समय समाजवाद स्थापनाका लागि लगाउनुभयो । त्यसैले उहाँलाई समाजवाद के हो भन्ने राम्रो ज्ञान छ । समाजवाद भनेको सिद्धान्त हो । त्यो नीति तथा कार्यक्रम होइन । समाजवादले त पहिला माक्र्सवादी सिद्धान्तमा आधारित निजी स्वामित्वको अन्त्य भएको राज्यको माग गर्छ । यो संसदीय बहुदलीय व्यवस्थामा त्यो सम्भव छैन । त्यसैले माननीय मन्त्रीज्यूले समाजवादी शिक्षाको कुरा नगर्दा राम्रो हुन्छ । मैले माथि पेस गरेका समस्या समाधान गर्नुस्, धन्य हुन्छ । स्रोत : कान्त्पिुर दैनिक
२०७५ चैत ४ गते मंगलबार बिहान ११ : ११ मा प्रकाशित
नेकपा नेताकार्यकर्ता पासवानसहित ४ जना गिरफ्तार